Friday January 14, 2022 - 10:33:56 in Wararka by Mogadishu Times
"Mareykanku wuxuu daneynayaa in kooxaha argagixisada ah, sida Al-Shabaab, ineysan saldhig ka sameysan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Wuxuuna dhaqaalaha ugu badan ku bixiyaa la dagaallanka kooxahaas, iyo xoojinta hey’adaha amniga Soomaaliya.”
"Soomaaliya waxay ku taalla isgoys istiraatiiji ah oo isku xira Afrika, Bariga Dhexe ee India. In ka badan 80% shidaalka dunida wuxuu ka dusaa marinka Bab Al-Mandab ee kaabbiga ku haya Soomaaliya. Sidaas darteed, Mareykanku wuxuu hubiyaa inaan looga sayid-caleyn aaggan.” ayaa uu qabaa Caynte.
"Mareykanku wuxuu Soomaaliya u arkaa dal dimoqraadi ah oo leh dowlad jaal la ah Reer Galbeedka, sidaas darteed, wuxuu maskax, maal iyo muruq ku bixiyaa inuu xoojiyo saaxiibtinnimadaas, si aysan Soomaaliya ugu dhicin faraqa Shiinaha ama Ruushka, sida dhacday toddobaatameeyadii.” ayuu yidhi Cabdiraxmaan Caynte
"Ujeedooyinka ugu waaweyn siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ah in la hormariyo xasiloonida siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee dalka, lagana hortago in Soomaaliya loo isticmaalo gabbaad nabdoon oo ay yeeshaan argagixisada caalamiga ah, iyo in la yareeyo dhibaatooyinka bini’aadantinimo ee ay sababeen colaadaha, abaaraha, fatahaadaha iyo dowlad xumida. Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an in ay dowladda Soomaaliya ka caawiso xoojinta hay’adaha dimuqraadiga ah, horumarinta xasilloonida iyo amniga, iyo sidii loo gaadhsiin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed.”